/ Imikhiqizo / I-Prohormone / 4-DHEA powder (571-44-8)
SKU: 571-44-8. Isigaba: I-Prohormone
I-AASraw inekhono lokuqala nokukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-oda olukhulu lwe-4-DHEA powder (571-44-8), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
Uma ufuna ukwandisa amandla nempilo ye-muscle, prohormones efana I-4-DHEA powder yindlela eyodwa yokuzuza ekusebenzeni kahle kwezempilo kanye nemisipha. I-4-DHEA iyi-prohormone ekhuthaza ukugcinwa kwe-nitrogen, amandla, nomthamo wegazi ukugeleza kuya emisipha. Ukwengeza i-4-DHEA ohlelweni lwakho lokuqeqesha amandla nesakhiwo somzimba onemiphumela emihle ngemiphumela emibi kakhulu.
Ividiyo ye-4-DHEA ye-powder
I-4-DHEA powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-4-DHEA powder
Formula Yamamolekhula: C19H28O2
I-Melt Point: I-138-141 ℃
Isitoreji Sokugcina: Ukushisa kwamakamelo
Umbala: I-White noma I-White powder i-Crystalline powder
Umjikelezo we-4-DHEA we-powder
Amakhemikhali Amakhemikhali: 4-DHEA powder
Amanye Amagama: 4-Dehydroepiandrosterone, i-4-DHEA powder, i-571-44-8
Ukusetshenziswa kwe-4-DHEA powder
I-5-DHEA iyi-prohormone eyenza umsebenzi we-androgenic onempilo futhi ingabuyisa amazinga e-DHEA emzimbeni. Ihlala ingasebenzi kuze kube yilapho izinqubo ziqaliswa ngesikhathi esifanele. I-hormone DHEA ekhishwa yizici ze-adrenal, kodwa ubuchopho buyenza futhi. I-DHEA ivumela i-androgens yokukhiqiza ne-estrogen, okuyinto inzuzo efunwa yilabo abafuna ukwandisa usayizi we-muscle nempilo ye-muscle. Njengoba umzimba udala, ukukhiqizwa kwe-DHEA emzimbeni kunciphisa. Ukunciphisa i-DHEA emzimbeni kuholela ekuphazamiseni kwe-hormonal, ukunciphisa umsebenzi wezocansi, nokwehla kwesifo sofuba.
I-4-DHEA powder iyi-prohormone efana ne-DHEA yemvelo emzimbeni. Izinzuzo zokufaka i-4-DHEA powder ohlelweni lwakho lwezempilo nemisipha luningi.
Imiphumela emibi ye-estrogenic evame ukuhambisana ne-anabolic steroids. Imiphumela emibi ye-Estrogenic ihlanganisa izinwele ezibonakalayo zanda, isifuba samadoda, amancane amathumbu esifubeni kwabesifazane, izinwele zobuso kubesifazane, ama-testes amancane kubantu, nokucindezeleka. I-4-DHEA powder ayinayo imiphumela efanayo. I-Estrogenic imiphumela emibi isabela, ngakho-ke yimbangela yesogen ephakeme.
Ukuzuza okuningi ngokusimama kwe-nitrogen emisipha
Ukugcinwa kwekhalori okuhlosiwe okukhushulwayo yokukhishwa kwe-muscle esiphezulu
Ukuthuthukiswa komsebenzi wesistimu ye-immune
Amandla we-muscle athuthukisiwe
Ukwehlisa isikhathi sokuphumula kwemisipha yokukhathala.
Imiphumela efanayo yemisipha nemiphumela engekho emthethweni
I-Pro Anabolic Precursor
Ukudlwengula okwandisiwe ku-Gym
Ukwandisa iMistic Muscle Mass
Akuyona i-Liver enobuhlungu
I-4-DHEA powder yiyona edinga ukulinganisela ekukhuthazeni ubukhulu be-muscle, hhayi ukuyinciphisa. Khuluma nochwepheshe wezokwelapha ngezindlela ezinganezelwa ngazo ukuze uhlangabezane nesidingo sakho esithile. Kubalulekile ukufaka i-4-DHEA powder ngokusekela umjikelezo kanye nokwelashwa kokujikeleza kokuthunyelwe. Kulula futhi ukuthatha i-4-DHEA i-powder kwifomu lepilisi ukuze unciphise izindleko nezindleko. I-4-DHEA powder iyinhlanganisela yomlomo egxilwe kakhulu futhi ingangena emzimbeni ngokushesha ngokusebenzisa amathissile ethu e-Liposomal.
Iyiphi isilinganiso se-4-DHEA powder
I-4-Androsterone iyinhlangano ye-anabolic enamandla, enamandla kakhulu eguqulekayo ku-testosterone ngezinguquko ezimbili ezithinta ukukhishwa. I-prohormone engenayo i-nonmethylated, okusho ukuthi inemiphumela encane noma ukucindezeleka esibindi kanye nezitho zomsebenzisi.
I-6-Andro isebenza kahle njenge-stacker noma isetshenziselwa namanye ama-prohormones wokukhwabanisa. Ku-700 kuya ku-1,000 mg, uthola umphumela owusizo kakhulu uma usetshenziselwa umjikelezo owodwa wokuhlanganiswa. Njengengxenye ye-stack, i-4-Andro ama-dose ama-spot aphakathi kwe-300 kuya ku-500 mg.
Kwabaqalayo: sebenzisa i-4-Androsterone ye-4 kumaviki angu-6 ku-300-500 mg.
Kubasebenzisi bokuqala: sebenzisa i-4-Androsterone ye-6 kumaviki angu-8 ku-300-750 mg.
Indlela i-4-DHEA powder esebenza ngayo
I-Prohormones iyisisombululo esithengekayo semiphumela ephezulu ye-hormone. Ama-Prohormone yizinhlanganisela ezithathwa ngomlomo. I-Prohormone isho ukuthi izenzo zakhiwe yi-precursor for hormone. Ngokwabo, aziphumelelanga. Umsebenzi wabo ukuhamba ngegazi. Uma i-prohormone iguqulwa i-hormone, ilawula amazinga e-hormone. Cabanga ngeprohormone njengeproprotein eguqula iphrotheni ukuthuthukisa ukusebenza kwezemidlalo kanye nempilo ye-muscle. I-4-DHEA powder ingenye yeprohormone enjalo.
Ngemva kokuqothulwa, i-4-Andro ingena egazini lakho bese iguqulwa ibe yi-testosterone. I-compound izoqala ukuba nokuziphatha okubonakalayo okuphezulu kwe-anabolic, okuholela ekubeni usayizi namandla kwanda ngenkathi kuthuthukiswa ubulili bakho be-sex - ukukunika lokho okungavamile "i-Alpha Male Ecstasy."
I-4-Androsterone ihlose ukuthuthukiswa kwemisipha kuzuza ngokuqondile, nxazonke ngama-8-12 amakhilogremu we-muscle mass ephakathi kwe-4 kuya kuma-6 amasonto okusebenzisa i-prohormone. Qaphela ukuthi lo mphumela uzobonakala ngokucacile ngokudla okufanele nokuzivocavoca.
Ngaphezu kwalokho, lindele ukuthi ube nemiphumela:
Isikhathi sokuphumula esheshayo
Yebo, udinga ukwesekwa komjikelezo uma uthatha i-4-Andro njengoba kungathinta ingcindezi yakho yegazi. Lokhu kubalulekile futhi ekuvuseleleni amazinga egazi ephilile.
Ngokufanayo, i-post cycle therapy (PCT) iyinxenye ebalulekile yomjikelezo njengoba izokusiza ngokuyinhloko ukugcina imiphumela ngenkathi isiza umzimba wakho ekubuyiseleni imali ejwayelekile ye-hormone.
Kunemiphumela emibi emibili okudingeka uyiqaphele. U-4-Andro unemiphumela emibi efanayo njengo-1-Andro.
Usongo lokulahlekelwa izinwele, i-acne, ukukhuliswa kwesisu, isifo se-testicular, ukwanda kwamalungu, ukucindezela okukhulu, nezinye izinkinga zenhliziyo.
I-cholesterol yakho ye-LDL (embi) izokhuphuka futhi i-HDL (okuhle) i-cholesterol izokwehla. Akusihle ngenhliziyo yakho.
Kungakhathaliseki ukuthi, le miphumela emibi iyophela emasontweni ambalwa ngemva kokuba umjikelezo wakho usuphelile. Ngakho akuzona isikhathi eside.
Yenza ukuthola igazi ngaphambi, ngemuva, nangesikhathi sokujikeleza kwakho. Futhi ube nomuthi wokujikeleza esandleni.
Unganciphisa le miphumela emibi ngokumane nje unciphise ubude bomjikelezo wakho kanye / noma ukunciphisa umthamo.
Ukuthengiswa kwe-4-DHEA ye-powder
Ingabe i-4-DHEA powder Inayo Yimuphi Umphumela Wemiphumela
U-4-Andro akanamiphumela emibi kakhulu. Ungase uzwe ukuguqulwa kwe-estrogen encane, izigxobo zomzimba, umfutho wegazi ophezulu, ukuhlukunyezwa futhi kwezinye izimo gynecomastia (gyno).
I-estrogen blocker iyadingeka ukunciphisa ukuguqulwa kwe-estrogen futhi ugweme i-gyno kanye neminye imiphumela emibi ye-estrogen. Lezi zindlela zinganciphisa noma zivinjiswe ngokuphelele kanye nesongezo esifanele sokondla.
Indlela yokuthenga i-4-DHEA powder kusuka ku-AASraw
I-4-DHEA i-powder Recipes:
I-Cytomel (T3) powder
Kulinganiselwe ngo- 2.75 aphume 5